Mifanaritaka amin’ny Fahalalahan-gazety Ao India · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Aogositra 2015 5:33 GMT
Mpikatroka ara-tsosialy Indiana milanja sora-baventy nandritra ny hetsi-panoherana ny fanapahan-doha an'i Yakub Memon, voaheloka tamin'ny fanapoahana baomba tao Mumbai tamin'ny taona 1993, tao an-drenivohitra. Sary: Himanshu Sharma. Copyright Demotix (30/7/2015)
Tamin'ny volana lasa teo, namoahan'ny governemanta filazana fampitandremana tsirairay ireo fantsom-baovao Indiana telo. Voalaza fa naneho tsy fanajana ny fitsarana sy ny filohan'i India ny ABD News, ny NDTV 24×7 ary ny 4×7 tamin'ny fandefasana votoaty mitsikera ny fanapahan-kevitra hamono ho faty an'i Yakub Meno, voaheloka ho faty noho ny fametrahana baomba sy nanapoaka izany tao Mumbai tamin'ny 1993
Nangataka tamin'ireo fantsom-baovao mba hanazava ny antony tokony tsy handraisan'ny governemanta fepetra ho azy ireo noho ny fandefasana votoaty mampiady hevitra ny Minisiteran'ny Fampahalalam-baovao sy ny Fampielezam-peo aman-tsary. Nandrahona hanatsoaka ny fahazoan-dalan'izy ireo mihitsy aza ny minisitera :
Fihetsika manafintohina & mandiso fanantenana avy amin'ny Governemanta Modi amin'ny fampileferana ny fahalalahan'ny haino aman-jery: Voalohany: fampitandremana ireo fahitalavitra telo; ankehitriny, fanakorontanana ny All India Radio ho manao tsikera befahatany
Ahitana resadresaka an-tariby niarahana tamin'i Chhotta Shakeel, olo-malazan'ny tontolo ambadika ao Mumbai izay heverina fa iray amin'ireo atidoha nikotrika ny fanapoahana baomba. Ao anatin'ny antsafa, nilaza i Shakeel fa tsy manan-tsiny i Yakub Menon ary “famonoan'olona ao anatin'ny lalàna” ny famonoana azy.
Noraisin'ireo haino aman-jery marobe ho mampisalasala sy endrika sivana ny fihetsiky ny minisitera. Saingy tsy niombon-kevitra ny sasany, mametraka ahiahy amin'ny alalan'ny feo mampangoraka hitan'izy ireo amin'ny tatitry ny haino aman-jery momba ny raharaha Menon sy ny famonoana ho faty.
satria mbola tsy matotra ny haino aman-jery ao India ary tsy mahay mampiasa ny fahalalahana miteny, dia mila fehezina amin'ny fitsipika aman-dalàna. Mandratra firenena
Tamin'ny matoandahatsoratra tao amin'ny Business Standard, nilaza i Jency Jacob fa “nanimba zavatra tsy mety amboarina” ny haino aman-jery tamin'ny alalan'ny famariparitana an'i Memon ho tsy manan-tsiny hikendren'izy ireo hahazoan'ny fanoherana ny fanamelohana ho faty vahana. Nilaza ihany koa i Jacob fa manao fihetsika tsy tompon'andraikitra ny haino aman-jery raha nandefa ny fampitandreman”i Shakeel fa hisy “voka-dratsiny” ny fahafatesan'i Memon. Anisan'ny mahatonga ireo mpanara-baovao Indiana ho tsy matoky ny haino aman-jery izany, hoy izy:
Isaky ny misy ezaka ataon'ny governemanta hifehezana ny haino aman-jery, manangam-bovona ny orinasa [haino aman-jery], ary ara-drariny izany. Saingy raha very fitokisana anao ny mpamaky sy mpijery anao, dia manokatra lalana ho an'ny governemanta ianao hanindriana anao. Ny ankamaroan'ny efitrano famoaham-baovao, manasongadina resadresaka “manokana” amin'ny gadra nandositra monina any ivelany tsy ho afaka hanamarika izany tsy fitokisana izany no taratry ny tsy fahafantaran'ny haino aman-jery ankehitriny ny zava-misy.
Ankilan'ny fahotan'ny media, tena tsy ampy ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety ao India. Mitana laharana mampalahelo 136 amin'ny firenena 180 i India tamin'ny tatitry ny Mpanangom-Baovao Tsy Voasakan-Tsisintany Reporters Sans Frontières amin'ny filaharan'ny Fahalalahan'ny Gazety. Tamin'ny volana Martsa, nitatitra ny Economic Times fa mikasa handany vola Rs200 crore ( 32 tapitrisa dolara Amerikana) ny fitondran'i Narendra Modi mba hanorina oniversite vaovao ho an'ny fanaovan-gazety mitovy amin'ny oniversiten'ny Fifandrasaina ao Shina izany tantanin'ny fanjakana ao Beijing. Tsy ilaina intsony ny milaza fa ho mpitondra-tenin'ny fanjakana ny oniversiten'ny fanaovan-gazety tahaka izany sy ny vokatra hoentiny.
Tsy mila mitady lavitra amin'ny tantara ny olona raha te hahita ohatra momba ireo manampahefana mijabaka amin'ny asa fanaovan-gazety sy ireo endrika haino aman-jery hafa (anisan'izany ny haino aman-jery sosialy). Ohatra iray amin'izany ny fandraràna ny fidirana amin'ny aterineto sy ny fizarana ny “Zanaka Vavin'i India” an'ny BBC, lahatsary fanadihadiana momba ny raharaha fanolanana an'i Nirbhaya, izay hita fa nalaina tahaka tamin'i Shina ny sivana antserasera ao India. Voaràra tsy mahazo alefa ao India ny lahatsary fanadihadiana ary avy eo nesorina tao amin'ny YouTube noho ny fangatahan'ny governemanta Indiana.
Manana izany Fisainana Aotirisy izany isika amin'ny fandraràna ny #IndiasDaughter tahaka ny mametraka ny lohanao ao anaty fasika mba tsy ho hitan'ny olona.
Misy olona ratsy any ho any, olon-dratsy izay manaisotra ny fahalalahana miteny rehetra ary manampi-bava ireo mpanao gazety tsy miankina: miraisa hina ry mpanao gazety!
Tamin'ny volana Jona, nisy namono tao avaratr'i India ilay mpanao gazety, Jagendra Singh rehefa avy notsolorana afo, voalaza fa ireo polisy sy jiolahy ao an-toerana eo ambanin'ny fitarihin'i Uttar Pradesh , minisim-panjakana misahana ny fampandrosoana ny vokatra ronono no nahavita ny heloka, noho ny fanoratany lahatsoratra tao amin'ny Facebook izay miampanga ny minisitra ho tafiditra amin'ny raharahan-kolikoly.
Vao haingana kokoa, namoaka baiko miafina mandràra ireo tranonkala 857 fantatra fa misy votoaty vetaveta ny Sampan-draharahan'ny Fifandraisandavitra. Taorian'ny fahatezeram-bahoaka, nanambara ny manampahefana fa natao vonjimaika ihany ny fandraràna, ankoatra ireo habaka ahitana fanararaotana ankizy na sary vetaveta misy ankizy.
Miditra dingana hafa manatantara mankany amin'ny fiverenan-tantara fahagola lavitra dia lavitra i India. Mirehareha amin'ny maha-Indiana [fandrarana ny pôrnô]
Mirehareha ho manana ny demaokrasia lehibe indrindra manerantany i India. Raha vato fehizoron'ny demokrasia tokoa ny asa fanaovan-gazety malalaka, dia hita fa mbola mila ezaka i India hananany izany anaram-boninahitra izany.